‘केपी ओलीले दवाव दिदैमा म नैतिकता गुमाउने मान्छे होइन’ : निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङ
विपक्षीले जंगली व्यवहार देखाए
जेष्ठ ३० गते, २०७८ आइतवार
13th June, 2021 Sun १४:३५:३१ मा प्रकाशित
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको दवावमा कुनै काम नगरेको दावी गरेका छन् । आइतबार आफ्नै निवासमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै उनले भने, ‘केपी ओलीले दवाव दिदैमा म नैतिकता गुमाउने मान्छे होइन । प्रदेशको आफ्नै विधि, विधानबाट सरकार चल्छ । कसैको आदेश, आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट चल्दैन । संघमा देखिएको विवादको कारण प्रदेश शिकार भयो भन्नु उचित छैन ।’
उनले कसैलाई दुई घण्टामै मुख्यमन्त्री बन्नु पर्यो भन्दैमा लोकतन्त्रमा विधि, प्रकृया मिचेर पद हस्तान्तरण गर्न गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘विपक्षीबाट मुख्यमन्त्रीलाई गलहत्याएर निकाल्नु पर्छ जस्तो जंगली व्यवहार देखाइयो’, उनले भने, ‘शनिबार विपक्षीले जे गरे त्यो गलत गरे । बहुमत दावी गरेपछि सबै कुरा विधि विधान अनुसार हुन्छ । घेराबन्दी नै गर्नु जरुरत छैन ।’
उनले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आफुले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्नु स्वाभाविक नै भएको दावी गरे । ‘ संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश सभाका ५९ जनाले नै दावी गर्न पाउँछ । मैले दावी गर्न नपाउने भन्ने छ र ? मैले पाउँदैन भन्नु निरङ्कुश चरित्रबाहेक अरु केही होइन् । मैले दावी गर्दा अपराध हुन्छ ? अलोकतान्त्रीक हुन्छ ? संविधानको कुन धारामा छ ?;, उनले भने ।
विधि र प्रकृया अनुसार सहज रुपमा लोकतान्त्रिक तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्दा समेत आफुमाथि प्रश्न उठाएको गुनासो गरे । विपक्षी दलले सत्ता र कुर्सी प्राप्तिका लागि अप्राकृतिक गठबन्धन भएको भन्दै त्यो धेरै दिन नटिक्ने दावी गरे । ‘जुन उदेश्यले गठबन्धन भयो, त्यसमा तलमाथि हुने वित्तिकै विग्रह शुरु हुन्छ’, उनले भने, ‘जसरी विपक्षी गठबन्धन बनेको छ, त्यो लामो समय टिक्दैन ।’
गुरुङले लोकतन्त्र भनेको अराजकतन्त्र र भिडतन्त्र नभएको टिप्पणी गर्दै जनताप्रति प्रतिवद्ध भएर निर्वाचित दलहरुले अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए । अहिले कुनै दल पनि विवाद मुक्त छैन’, उनले भने, ‘सबै पार्टी चिराचिरा भएको छ । अप्रकृतिक गठबन्धन भएको छ । सबै विधि, प्रकृया र विधान मिचेका छन् । यस्तो खालको गतिविधिले केही समय विपक्षीलाई फाइदा भएपनि यस्ता अराजक गतिविधिले दलहरुलाई समाप्त पार्छ ।’
उनले संसद विघटन गरी मध्यावधिमा जाने आफ्नो प्रयास भएको भनि मिडियामा आएको कुर सरासर झुट भएको बताए । आफुले जहिले पनि निष्ठाको राजनीति गर्ने भन्दै उनले मिडियालाई पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गरे ।
यस्तै, उनले प्रदेश प्रमुखले एकल प्रस्तावको आधारमा विपक्षी दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा नियुक्त गरेको भन्नु आफ्नो भावना नबुझेको बताए ।